पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मिडियाकर्मीहरुलाई के भने ! राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति — Himali Sanchar
काठमाडौ : पूर्वराजाको भाइटीकाको फोटो/भिडियो खिच्न गएका मिडियाकर्मीहरुलाई भने ज्ञानेन्द्र शाहले ‘तपाईँहरु आइदिनुभएकोमा धन्यवाद’ भने। पत्रकारहरुलाई व्यक्तिगत रुपमै ‘तपाईँ त नयाँ हुनुहुन्छ कि के हो?’ भनेरसमेत सोधे, परिचय गरे।
कस्तो उल्टो जमाना आएको। त्यतिबेलाका नेताहरु राजसी ठाँटमा उत्रिएका छन्। त्यतिबेलाका राजा भने नजिकिन खोज्दैछन्। राष्ट्रपति निवासको ढोका बन्द गरेर बसिरहेको बेला पूर्वराजा भने भाइटीका सकाएर मिडियाको माइक सामु ‘बाइट’ (प्रतिक्रिया) समेत दिइरहेका छन्।
पूर्वराजाको भाइटीका पनि त प्राइभेट सेरेमोनी नै हो नि। तर उनी आफ्नो भाइटीका मिडियामार्फत् जनतासामु पुगोस् भन्ने चाहन्छन्। पत्रकारहरुलाई आइदिएकोमा धन्यवादसमेत दिन्छन्। राष्ट्रपति कार्यालय भने साँझ ५ बजे बल्ल यस्तो विज्ञप्ति पठाउँछ :
यो गजबको अन्तर्विरोध राष्ट्रपति स्वयंले वा उनका सल्लाहकारहरुले हेरिरहेका होलान् कि नाइँ? हेरिरहेको भए लाज लाग्यो कि गर्व लागिरहेको होला? माईसंसारबाट